Agụ na web adịghị mfe. Ndị na-ahụ maka kọmputa nwere obere mkpebi ngebichi, na ọkụ ha na-atụ na-eme ka anya anyị nwee ike ọgwụgwụ. Na mgbakwunye, ọtụtụ weebụsaịtị na ngwa na-ewu site na ndị na-enweghị ọzụzụ ọfụma na nka edemede ederede ma ọ bụ eserese eserese.
Mgbe ị na-ede, gbaa mbọ hụ na ndị isi ederede tinye isi ihe ederede ha na-anọchi anya obere okwu, echekwala na onye ọrụ agụchaala akụkụ dị n'elu ma ọ bụ n'okpuru. Zere iwe mara mma ma ọ bụ okwu amamihe; doo anya bụ oké egwu. Isi isiokwu ndị nwere isi ma baa uru ga-eme ka onye na-agụ ya tinye aka ma kpọọ ya ka ọ gụọ ya.
Ka ị na-ele anya na peeji a, gbasaa ma mechie anya gị ruo mgbe ederede na-enweghị nghọta. Peeji ahụ ọ na-ekewa nke ọma na ngalaba? Nwere ike ịgwa onye isi ihe nkebi nke ọ bụla bụ? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịmalitegharị imewe gị.